မော်လမြိုင်မြို့က Review ကောင်းတဲ့ဟိုတယ်များ - LODGGY
ဒီတစ်ခေါက်ခရီးသွားတဲ့အခါ ဘယ်သွားဖို့ Plan လုပ်ထားလဲ? မော်လမြိုင်သွားကြည့်မလား၊🤔🤔 မော်လမြိုင်မှာ တည်း၊ ဘီလူးကျွန်းတို့၊ ကျိုက်သလ္လံဘုရားတို့ဘာတို့ သွားလည်ဖို့ စိတ်ဝင်စားလား? 😍😍 သွားချင်တဲ့သူတွေ၊ Plan ရှိတဲ့ သူတွေအတွက် ✈️🏠တည်းခိုဖို့အတွက် Review ကောင်းကောင်းနဲ့ နေရာကောင်းကောင်းလေးတွေ ရှာပေးထားတယ်။ တစ်ချက်ကြည့်လိုက်….🤩🤩
Booking တင်ရင်လဲ လွယ်တယ်နော် Lodggy App ရှိနေပြီဆိုတော့လေ။ ဖုန်း 09 4444 38366 ဖြစ်ဖြစ်၊ Messenger ကနေတစ်ဆင့်လဲတင်လို့ရသေးတယ်နော်။
App လေးမရှိသေးရင်လဲ Download ထားလိုက်တော့…
👉 Andriod Application —> http://bit.ly/2G7mahw)
1. Mawlamyaing Strand Hotel
မော်လမြိုင်မြို့ရဲ့ နာမည်ကြီး Strand Hotel ကတော့ ကမ်းနားလမ်းမှာရှိပြီး မြေနေရာအကျယ်ကြီးမှာ အဆောက်အဦအကြီးကြီးကို ခန့်ခန့်ညားညားဆောက်လုပ်ထားတာပါ။ ပေးရတာနဲ့တန်အောင် ဟိုတယ်အပြင်အဆင် အမိုက်စားနဲ့ facilities ကောင်းကောင်းလေးတွေ သုံးထားပြီး သံလွင်မြစ်အလှကို အကောင်းဆုံးခံစားနိုင်တဲ့ ဟိုတယ်တစ်ခုပါ။
🔹လိပ်စာ – အောက်လမ်းမကြီးနဲ့ ကမ်းနားလမ်းကြား၊ မော်လမြိုင်မြို့။
🛌 Superior – 77,000 MMK
🛌 Deluxe (Double Only) – 93,500 MMK
🛌 Royal Deluxe – 150,000 MMK
မြို့ရှောင်လမ်းပေါ်မှာ ရှိတဲ့ Royal Hinthar Hotel မှာတော့ အေးဆေး အနားယူ အပန်းဖြေချင်သူတွေအတွက် ကွက်တိ။ အခန်းတွေက သက်တောင့် သက်သာရှိတဲ့အပြင် ရေကူးကန်ရော၊ ဝါသနာရှင်တွေအတွက် ဘိလိယက်ခုံလေးတောင်ပါသေး။ မြို့ရှောင်လမ်းဆိုပေမဲ့ လမ်းမကြီးပေါ်ဆိုတော့ ဟိုနားဒီနားရွတ်ခနဲဆိုရောက်တယ်နော်။
🔹လိပ်စာ – အမှတ် (၇၃), မြို့ရှောင်လမ်း၊ မြေနီကုန်းရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်။
🛌 Deluxe – 57,000 MMK
3. Hotel KS, Mawlamyine
မြို့ရှောင်လမ်းမှာရှိပြီး မော်လမြိုင်ဘူတာကြီးနဲ့နီးပါတယ်။ ဟိုတယ်က ဖွင့်ထားတာသိပ်မကြာသေးတဲ့ အသစ်လေးဖြစ်လို့ အရမ်းသန့်ပြီး အခန်းတွင်းအပြင်အဆင်နဲ့ အရောင်လေးတွေသုံးထားတာလည်း မိုက်ပါတယ်။ အထပ်မြင့်အဆောက်အဦဖြစ်လို့ ရှုခင်းကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။ ဟိုတယ်ရဲ့ Rooftop Bar ကနေလည်း မော်လမြိုင်မြို့ရဲ့ ညချမ်းအလှကိုလည်း ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
🔹လိပ်စာ – အမှတ် (၇၃)၊ မြို့ရှောင်လမ်း၊ မြေနီကုန်းရပ်၊ မော်လမြိုင်။
🛌 Standard – 30,000 MMK
🛌 Superior – 35,000 MMK
🛌 Deluxe – 40,000 MMK
🛌 Junior Suite – 45,000 MMK
🛌 Family – 50,000 MMK
4. Hotel Queen Jamadevi
မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်မှာ မွန် ရိုးရာအိမ်လေးတွေနဲ့ မြို့ပေါ်မှာလို့မထင်ရပဲ မွန်ရွာလေးထဲရောက်သွားရသလို ခံစားမှုမျိုးပေးတဲ့ ဟိုတယ်လေးပါ။ အခန်းနာမည်ကို မွန်မင်းသား၊ မင်းသမီးနာမည်လေးတွေပေးထားပြီး ဟိုတယ်အလယ်မှာဆိုလည်း ရာသီအလိုက် သီးနှံတွေစိုက်တဲ့စိုက်ခင်းလေးလည်းရှိပါတယ်။
🔹လိပ်စာ – အမှတ် (၁၂၇) ရာဇဓိရာဇ်လမ်း၊ မြိုင်သာယာ၊ မော်လမြိုင်မြို့။
🛌Deluxe – 35,000 MMK
🛌Bungalow (မွန်ရိုးရာအိမ်) – 55,000 MMK
5. Hotel Suggati, Mawlamyaing
သံလွင်ဖြစ်ဘေး ကမ်းနားလမ်းဆို သွားကြမယ်ဆိုတာကြီးပဲ။ မြစ်ကြီးကို ငေးကြည့်ချင်တဲ့သူတွေ အတွက် Suggati Hotel ဆိုတာရှိတယ်နော်။ မြစ်နဲ့ကားလမ်းလေးပဲခြားတာဆိုတော့ မြင်ကွင်းကလဲ ကောင်း၊ Gym တွေ Meeting Room တွေ Facilities တွေကလဲရှယ်၊ နေဝင်ဆည်းဆာကလဲ ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ အဆင်ပြေပြီပေါ့။
🔹လိပ်စာ – အမှတ်(၅၈)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ မော်လမြိုင်။
🛌 Superior City View – 100 USD
🛌 Superior River View – 120 USD
🛌 Deluxe City View – 130 USD
🛌 Deluxe River View – 180 USD
6. Cindrella Hotel
မောရဝတီပန်းခြံအနီးမှာရှိပြီး ၃ ထပ်အဆောက်အဦကို ရှေးဟောင်းပုံစံ အငွေ့အသက်လေးရအောင် ဆောက်လုပ်ထားတာပါ။ ဟိုတယ်အတွင်းပိုင်းနဲ့ အခန်းတွေကိုလည်း မြန်မာ့လက်မှု အနုလက်ရာပစ္စည်းတွေနဲ့ အလှဆင်ထားပါတယ်။
🔹လိပ်စာ – အမှတ် (၂၁)၊ ဗဟိုလမ်း၊ မောရဝတီပန်းခြံအနီး၊ မော်လမြိုင်မြို့ပါ။
🛌 Superior (Single) – 25,000 MMK
🛌 Superior room – 40,000 MMK
🛌 Deluxe with Balcony – 50,000 MMK
7. Ngwe Moe Hotel
ငွေမိုးဟိုတယ်လေးက မော်လမြိုင်ကမ်းနားလမ်းပေါ်တည်ရှိပြီးတော့ ကျိုက်သုတ်ဘုရား၊ မွန်ယဉ်ကျေးမှုပြတိုက်တို့နဲ့ နီးနီးလေးပါပဲ။ အထပ်မြင့်အဆောက်အဦဖြစ်ပြီး သံလွင်မြစ်ရဲ့ ရှုခင်းအလှတွေကို ခံစားနိုင်အောင် ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ဟိုတယ်တစ်ခုပါ။ အခန်းတွင်း အပြင်အဆင်နဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း ကောင်းကောင်းလေးတွေ သုံးထားတာကြောင့်လည်း တည်းခိုသူတွေကို စိတ်ချမ်းမြေ့စေမှာ အသေအချာပါပဲ။
🔹လိပ်စာ – ကမ်းနားလမ်းနဲ့ ကျိုက်သုတ်ဘုရားလမ်းထောင့်၊ မော်လမြိုင်မြို့။
🛌 Superior room – 52,500 MMK
🛌 Deluxe room – 57,750 MMK
🛌 Deluxe River View – 68,250 MMK
8.Royal Garden Hotel
ရေကူးကန်လေးရယ်၊ အခန်းကလဲ သက်တောင့်သက်သာရှိ၊ ကားတွေပါတွေထားလို့ အဆင်ပြေမယ့် Parking လဲရှိတော့ ကိုယ့်အစီစဉ်နဲ့ကိုယ်သွားမဲ့ သူတွေ အတွက် အဆင်ပြေတယ်လေ။ ဘေးမှာ အထပ်မြင့်တွေမရှိတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ အရသာတစ်မျိုးပေါ့။
🔹လိပ်စာ – အမှတ် (၆၅၄) ပိတောက်လမ်း၊ ဇေယျာမြိုင်ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်။
🛌 Deluxe – 35,000 MMK
🛌 Family room (၄ ယောက်ခန်း) – 60,000 MMK
🛌 Family room (၅ ယောက်ခန်း) – 70,000 MMK
လေးဧကကျော် ကျယ်ဝန်းတဲ့ ဟိုတယ်ဝင်းထဲမှာ Facilities အပြည့်နဲ့ ဘန်ဂလိုပုံစံလေးတွေမို့ အေးအေးဆေးဆေး အနားယူချင်သူတွေအတွက် ကွက်တိပါပဲ။ တစ်နေ့တာလျှောက်လည်ရင်း မောပန်းသမျှကို အပန်းဖြေဖို့ အပင်လေးတွေခြံရံထားတဲ့ ရေကူးကန်လှလှလေးက အိုအေစစ်လေးလို့ထင်မှတ်စရာပါ။ ကျန်းမာရေးအလှအပချစ်မြတ်နိုးသူတွေအတွက် Sawasdee Spa၊ သီချင်းဆိုဝါသနာပါသူတွေအတွက် ကာရာအိုကေခန်းတို့လည်း ရှိပါတယ်။
🔹လိပ်စာ – အမှတ် (၁၃၂/A)၊ ဦးစစ်မောင်လမ်း၊ မြိုင်သာယာရပ်၊ မော်လမြိုင်မြို့။
🛌 Superior – 28,000 MMK
🛌 Deluxe Room – 33,000 MMK
🛌 Sawasdee Family (3 pax) – 55,000 MMK
10.Golden River Hotel
မြို့ထဲနဲ့လဲ အရမ်းမဝေး၊ အေးအေးဆေးဆေး အနားယူမယ်ဆိုရင် Golden River Hotel ရှိတယ်။ မိသားစုအခန်းတွေဆိုလဲ ရှယ်၊ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းနဲ့ ဆိုတော့။ ကားလမ်းမကြီးဘေးမှာပဲဆိုတော့ ဟိုနားဒီနားသွားလဲ လွယ်တာပေါ့။TV, Aircon, Minibar အစရှိတဲ့ Facilities တွေလဲ အစုံရ၊ ကားပါကင်လဲရှိဆိုတော့ အဆင်ပြေပြေတည်းခိုလို့ကောင်းတယ်နော်။
🔹လိပ်စာ – ပိတောက်လမ်း၊ ဇေယျာမြိုင်ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်။
🛌 Standard – 35,000 MMK
🛌 Superior (Bathtub) – 40,000 MMK
🛌 Family (4Pax) – 60,000 MMK
🛌 Family (5Pax) – 70,000 MMK
သံလွင်မြစ်ဘေးမှာရှိပြီး ဘန်ဂလိုလေးတွေ အစီအရီနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ဟိုတယ်တစ်ခုပါ။ ဘန်ဂလိုလေးတွေမို့ အေးအေးချမ်းချမ်းရှိပြီး မနက်ဆို မြက်ခင်းပြင်ပေါ်လမ်းလေးလျှောက်ရင်း သံလွင်မြစ်ပြင်ကို ဖြတ်တိုက်လာတဲ့ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်တဲ့လေထုကို ရှုရှိုက်ရတာလည်း စိတ်ကြည်နှုးစရာပါပဲ။ မိသားစု အေးအေးဆေးဆေး အနားယူတည်းခိုချင်သူတွေအတွက် ရွေးချယ်လို့အကောင်းဆုံး ဟိုတယ်တစ်ခုပါ။
🔹လိပ်စာ – ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနှင့် အောက်လမ်းမကြီးထောင့်၊ မန္တလေးရပ်၊ မော်လမြိုင်မြို့။
🛌 Superior – 45,000 MMK
🛌 River View Suite – 68,000 MMK
Booking တင်မယ်ဆိုရင် Messenger ကဖြစ်စေ၊ Lodggy.com – 09 4444 38366 ကိုဆက်သွယ်ပြီး စုံစမ်းဘိုကင်တင်နိုင်ပါတယ်နော်။ App လေးလဲ Download လုပ်ဖို့ မမေ့နဲ့ဦးနော်။